DAAWO VIDEO: Maxaa ka jira in Somaliland ay degmada Taleex ku soo dhaweysay ciidamo ka soo goostay Puntland? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Maxaa ka jira in Somaliland ay degmada Taleex ku soo...
DAAWO VIDEO: Maxaa ka jira in Somaliland ay degmada Taleex ku soo dhaweysay ciidamo ka soo goostay Puntland?
Taleex (Halqaran.com) – Somaliland ayaa waxa ay degmada Taleex ee Gobolka Sool, ku soo dhowaysay ku dhowaad 100 Askari oo ay sheegtay in ay kasoo Goosteen dhinaca Puntland.
Sarkaal u hadlay Ciidamada oo sheegay inay kasoo baxeen Puntland ayaa Xusay inay Muddo dheer ku jireen Puntland, islamarkaana aysan jirin ciidamo ka soo jeeda deegaanka Taleex oo ku haray Puntland.
Wasiirka Cusub ee Warfaafinta Somaliland Saleebaan Cali Koore ayaa soo dhoweeyay Ciidamada ka soo baxay Puntland, isagoona sheegay inay Xubnahan in badan isku hayeen Arimaha deegaanka, balse hada ay Garwaaqsadeen inay ku soo biiraan Somaliland.
Si kastaba, ciidamada kasoo jeeda Gobolada Sool iyo Sanaag ayaa inta badan ku Caanbaxay inay Noqdaan Kuwa Guur-guura, waxaana taasi sabab u ah muranka iyo sheegashada Puntland iyo Somaliland ee Gobolada Sanaag iyo Sool.
Ciidamo ka soo goostay Puntland oo ku biiray Somaliland